कोरोनाले मृत्यु भएकी महिलाको परिवारसहित १८७ को पीसीआर नेगेटिभ- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
नेपालमा के परिवर्तन भयो गणतन्त्र आएर ? सायद, यो प्रश्नमाथि हामी सर्वाधिक बहस गर्नेछौं, यो साताभरि । फेरि उही कुरा दोहोरिनेछन् वर्षभरिका लागि- यता सवारी, उता सवारी, यो सन्देश, त्यो सन्देश !
जेष्ठ १०, २०७७ कृष्ण खनाल
नेपाल गणतन्त्र भएको १२ वर्ष भयो । १५ जेठमा तेह्रौं गणतन्त्र दिवस मनाइन्छ, सरकारी तहमा औपचारिक रूपले । ‘डी फ्याक्टो’ गणतन्त्रको अभ्यास गर्न थालेको त २०६२/६३ आन्दोलनको लगत्तैदेखि हो ।
त्यो पनि हिसाब गर्ने हो भने १४ वर्ष नाघिसक्यो हाम्रो गणतन्त्र-यात्रा । त्यही आन्दोलनको सफलताले झुकाएको हो तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई । संविधानसभाबाट गणतन्त्रको घोषणा एउटा औपचारिकता मात्र थियो, राजालाई नारायणहिटी दरबारबाट वैधानिक रूपमा बिदा गर्ने बाटो । गणतन्त्रमा अवतरणको प्रक्रिया ४ जेठमा प्रतिनिधिसभाको ऐतिहासिक घोषणाबाटै सुरु भएको थियो । नेपालमा के परिवर्तन भयो त गणतन्त्र आएर यी बाह्र-चौध वर्षमा ? सायद, यो प्रश्नमाथि हामी सर्वाधिक बहस गर्नेछौं, यो साताभरि । फेरि उही कुरा दोहोरिनेछन् वर्षभरिका लागि- यता सवारी, उता सवारी, यो सन्देश, त्यो सन्देश !
मलाई यहाँ दुइटा देशको उदाहरण दिएर कुरा अघि बढाउन मन लागेको छ । दक्षिणपूर्वी एसियामा पर्ने मलेसिया संसदीय प्रणाली भएको एउटा संघीय देश हो, तर गणतन्त्र होइन, राजा छन् त्यहाँ । हरेक पाँच वर्षमा नयाँ राजाको चुनाव हुन्छ । राजालाई कार्यकारी अधिकार छैन, एक प्रकारले संवैधानिक राजतन्त्र छ । मलेसियाली संघमा आबद्ध १३ राज्यमध्ये नौवटामा राजतन्त्र छ, सुल्तानी व्यवस्था छ । त्यसलाई सामन्ती प्रणालीको अवशेष भने पनि हुन्छ । नौ जना सुल्तानहरूको एउटा सम्मेलनले आफूमध्येबाट वरिष्ठताका आधारमा पाँच वर्षका लागि राष्ट्राध्यक्ष चुन्छ, त्यही व्यक्तिलाई राजा भनिन्छ । के भिन्नता होला त्यहाँको राजतन्त्र र हाम्रो गणतन्त्रमा ? हामीले पनि त एकपटक पदमा पुगेका सबै मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिलाई राजघराना अर्थात् सुल्तानजस्तै त बनाएका छौं । गाडीका ताँती र सुरक्षाकर्मीको लावालस्कर लाग्छ जता गए पनि । त्यो कहिलेसम्मका लागि हो टुंगो छैन, बाँचुन्जेलसम्म चल्छ होला । कहाँ छ हामीसँग लोकतान्त्रिक-गणतान्त्रिक राजनीतिक संस्कार ?
सन् ६० को दशकसम्म युद्ध र आन्तरिक कलहले अक्रान्त थियो मलेसिया । त्यहाँ लोकतन्त्र पनि नाम मात्रको र नियन्त्रित थियो । तर, केही दशकभित्रै त्यसले उल्लेख्य प्रगति गर्‍यो । आज लोकतन्त्रले पनि संस्थागत स्थिरता हासिल गरेको छ । काम नलाग्ने गए-गुज्रेको ठाउँ भनेर मलेसियाले अलग गरिदिएको नयाँ मुलुक हो सिंगापुर, त्यसको प्रगति झन् कता हो कता ! दुई दशकमै तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्वमा पुगेको नमुना मुलुक हो त्यो । सिंगापुरमा राजा छैन, गणतन्त्र नै छ । मलेसिया भूगोलका हिसाबले नेपालभन्दा ठूलो भए पनि जनसंख्या करिब उत्तिकै हो । पूर्वाधार पनि ६० को दशकसम्म खासै बनेको थिएन । आफूसँग भएको प्राकृतिक स्रोतको सफल उपयोग गर्न सकेको उदाहरण हो मलेसिया । सिंगापुर त के थियो र, बालुवाको टापुबाहेक ! खानेपानी पनि किन्नुपथ्यो त्यहाँ । तर, मानिसको मिहिनेत र प्रविधिको प्रयोगले बनेको देश हो त्यो । त्यस क्षेत्रका थाइल्यान्डलगायत अरू मुलुकहरू पनि बितेका केही दशकमा उल्लेख्य विकास गरेका देशमा गणना गरिन्छन् ।
चाहे राजाको शासन होस्, या लोकतन्त्र, गणतन्त्र र प्रजातन्त्र, हामीले चाहिँ केवल गुमाएको अवधि हो बितेका दशकहरू । राजनीतिक आन्दोलन र नाराबाजीमा हामी अरूभन्दा धेरै अगाडि छौं । देखाउने राजनीतिक परिवर्तन पनि हासिल गरेका छौं तर उपलब्धिचाहिँ हात लाग्यो शून्यजस्तो भएको छ । किन यस्तो भएको होला ? प्रकृतिले हामीलाई निकै वैभवशाली बन्ने अवसर दिएको छ । जलस्रोत मात्रै पनि पर्याप्त छ हाम्रो समृद्धि र प्रगतिका लागि, सही उपयोग र विनिमय गर्न जाने । कर्णाली क्षेत्र घुम्दा देखिन्छ— प्रकृतिको वैभवशाली उपस्थिति तर त्यहीँ छ, अविकास र दरिद्रताको ठूलो खण्डहर । कहाँ छ हाम्रो त्रुटि ? निश्चित रूपमा राजनीतिको अयोग्यताको उदाहरण हो यो । दोषी कुनै न कुनै रूपमा समाजका सबै क्षेत्र होलान्, तपाईं-हामी पनि हौंला । तर, सबैभन्दा दोषी नि:सन्देह ड्राइभिङ सिटको राजनीति नै हो ।
हिजो हामीले धेरै दोष २०१७ साल पुस १ गते लोकतन्त्रको घाँटी निमोठेको घटना र त्यसपछिको निर्दलीय राजनीतिमा देख्यौं । त्यो सत्य हो, त्यसमा कुनै शंका छैन । निर्दल फालेर बहुदलमा गएपछि हाम्रो बाटो सफा हुन्छ भन्ने लागेको थियो, निकै ठूलो आशा थियो । नेताहरूले सिंगापुर, स्विट्जरल्यान्डको मिठो सपना पनि बाँडे, तर कहीँ पुगिएन । राजतन्त्र पो हो कि बाधक, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यसंरचना पो हो कि ? गणतन्त्र र संघीयताको नयाँ एजेन्डा बोक्यौं २०६२/६३ को आन्दोलनमा । तर, हाम्रो बाटो अझै दलदलमै छ, झन् दुरूह बन्दै गएजस्तो लाग्छ ।
मलाई पनि बेलाबेला घोचिरहन्छन्, यी प्रश्नहरूले । हामीले खोजेको लोकतन्त्र, गणतन्त्र अहिले जे देखेका छौं, जे भोगेका छौं त्योभन्दा बढी के हो त ? के फरक हुन्छ होला म आफैं राष्ट्रपति भएँ भने, या सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री, सत्तारूढ वा विपक्षी दलको ठूलो नेता हुँदो हुँ त ! लाग्छ, अहिलेका सबै चालचलन फालिदिन्थें । बिलकुलै नयाँ सिर्जना गरिदिन्थें सबैले गर्व गर्न पाउने गरी । त्यो अझै पनि सम्भव छ, गणराज्यको सादृश्य प्रतीक राष्ट्रपतिको पदमा एउटा सत्पात्रलाई राख्न सकेमा । सफा र योग्य नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पाएमा । नेताको खोकिलाबाट मुक्त, अलिकति मौलिक र नागरिक सोच भएको ‘मान्छे’ त्यहाँ पुग्न सकेमा । पद र सुविधाको भोको दरिद्र मानसिकताबाट चोखो मान्छेलाई त्यहाँ उभ्याउन पाएमा । त्यस्ता मान्छे हामीसँग नभएका होइनन् । गणतन्त्रलाई आफ्नै कदमा ढाल्ने प्रवृत्तिका मान्छेले व्यवस्थापन गरेको गणतन्त्रमा त्यस्ता मानिस नदेखिनु, नभेटिनु कुनै आश्चर्य होइन ।
यो लामो लकडाउनमा म बीपी कोइरालाका पुस्तकहरू फेरि पढ्दै छु । तिनमा उहाँका विचार र चिन्तनलाई खोतल्ने प्रयास गर्दै छु । धेरै लामो समयदेखि त्यसै थन्किएर रहेको मेरो इच्छा हो यो । धेरैलाई लाग्न सक्छ, बीपी कोइराला र गणतन्त्रको के सम्बन्ध छ ? बीपी त संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, कहाँबाट आयो बीपी र गणतन्त्रको साइनो ? हो, बीपीले सोझै गणतन्त्रको वकालत गरेको पाइँदैन । तर, म उहाँका अभिव्यक्तिहरूमा गणतन्त्रको भावना र सोचको कुनै कमी देख्दिनँ । अहिले गणतन्त्रको मस्ती मार्नेहरूभन्दा त कता हो कता बीपीमा क्रान्तिकारी सोच थियो, त्यो सोचलाई अहिलेका कथित गणतन्त्रवादीको भन्दा कम भन्न मिल्दैन । २०१७ सालपछि जेलमा बन्दी भएर बस्दा उहाँ सोच्नुहुन्छ र डायरीको पानामा लेख्नुहुन्छ- ‘के क्रान्तिले जहिले पनि निम्नस्तरीय व्यक्तिहरूको हातमा आफूलाई सुम्पेर आफ्नो आदर्श र लक्ष्यलाई परित्याग गरेर विकृतस्वरूप धारण गर्नुपर्छ ? के क्रान्ति पनि यसमा लागेका आदर्श पुरुषहरू, दार्शनिक, कलाकार, साधारण व्यक्तिहरूभन्दा बदमास लुच्चा, घृणा र वासनाका अर्धमानव प्रतिमूर्तिहरूलाई खोजी हिँड्छ ?’
‘जेलजर्नल’ को एउटा पृष्ठमा कोरिएका यी प्रश्नले मलाई हल्लायो । नेपालको वर्तमान राजनीतिलाई सम्झिँदा निकै मार्मिक लाग्यो यो प्रश्न । बीपीले यी हरफ कोरेपछि दुई-दुईवटा ठूला आन्दोलन भए नेपालमा । राजतन्त्र फ्याँकियो, गणतन्त्र आयो । तर, यी हरफ अहिले पनि उत्तिकै टड्कारो साबित भएका छन्, किन ? संयोगको कुरा, यसैबेला म १२ वर्षको गणतन्त्रको यात्राबारे संक्षिप्त मन्थन गर्न बसेको छु । हाम्रो गणतन्त्र-यात्रामाथि फुटकर टिप्पणी वा प्रतिक्रियाभन्दा एउटा सिंगो आलेख नै बढी उपयुक्त लाग्यो ।
नेपालमा आन्दोलन गर्न सजिलो छ, तर त्यसलाई जोगाउने हाम्रो क्षमता भने निकै कमजोर छ । त्यसैले हरेक आन्दोलन छिट्टै स्खलित हुन्छ, उद्देश्यबाट विमुख हुन्छ र केही सीमित सत्ताधारीको उपभोगको अवसर र उपभोग्य वस्तु बन्छन्— मधेस आन्दोलन नै किन नहोस् ! २००७ सालदेखि हामीले बेहोर्दै आएको यथार्थ यही हो । अझ अहिले त प्रोजेक्टका उत्पादन बनेका छन् कतिपय आन्दोलनहरू । प्रोजेक्ट छ, आन्दोलन छ । प्रारम्भ, प्रयोग र परिणाम सबैतिर स्खलन हुने र गुमाउने अवस्थामा घँचेटिन थालेको छ- आन्दोलनको नाम ।
क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्ति एउटा कुरा हो, जुन प्राय: तत्कालै हुनेगर्छ । स्खलन र विचलनचाहिँ अलि समय लिने कुरा हो । तर, प्रतिक्रान्तिजस्तै गरी यो निकै चाँडै हुन्छ नेपालमा । किन होला ? सायद, हरेक दस-बाह्र वर्षको चक्रमा आन्दोलन गर्नुपर्ने हाम्रो नियतिको कारक पनि यही होला । क्रान्ति वा आन्दोलन सम्झौतामा टुंगिँदा पुरानो सत्ता र नयाँ सत्ताको द्वन्द्व र त्यसमा पुरानो सत्ता हावी भयो भने परिवर्तनको उद्देश्य र बाटो विचलित हुनु अस्वाभाविक होइन । हाम्रा सबै आन्दोलन त्यस प्रकृतिका पनि थिएनन् । पटक-पटक आन्दोलन दोहोरिरहनु भनेको आन्दोलनले मिसन गुमाएको संकेत हो ।
हाम्रा राजनीतिक आन्दोलनहरूको पृष्ठभूमिमा हामी दुइटा कुरामा बहुत नराम्रोसँग चिप्लिएका छौँ- मिसन र पात्रता । जे नारा लगाएको भए पनि मिसन हाम्रो परिवतर्नमुखी भएन, शासकीय विस्थापनामा मात्रै केन्द्रित भयो । हाम्रो मिसन भइराखेकोलाई फालेर आफू पुग्ने मात्र भयो । अर्थात् नेतृत्वको दृष्टि केवल सत्ताप्राप्तिमा सीमित भयो । पात्रताको त झन् कुरै नगरौं- भ्रष्ट, बेइमान, अयोग्यहरूको अकाट्य जालो भएका छ- नेता र तिनका वरिपरिका मान्छेहरूको । आफू त भए-भए, अहिले कोभिड-१९ को प्रकोपजस्तै पूरै समाजमा अयोग्यता र भ्रष्टाचारको भाइरस छोडेको अवस्था प्रतीत हुन्छ । भ्रष्ट, अयोग्य र लोभी नेतृत्व आफूभन्दा गतिलो मान्छे चयन गर्ने आँट नै गर्न सक्तैन । सफा र योग्य मान्छेको अपेक्षा गर्नु भनेको अहिले देखिएका नेताको चरित्रविरोधी कुरा हो । झुक्किएर एकाध टिपिएकाहरू प्नि छिट्टै अलग भएका छन् ।
नेताले ‘महान् आन्दोलन’ भनेर मुठ्ठी उठाउँदैमा कुनै पनि आन्दोलन महान् बन्दैन । यो त अरूको नक्कल मात्रै हो, ‘कपी-पेस्ट’ हो खोक्रो क्रान्तिकारिताको । जनतामा गुन्जेको भावनालाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ आफैं उदाहरण बनेर काम र व्यवहारमा, अनि मात्र त्यसले महानता पाउँछ, अर्थ दिन्छ । नेपालका अधिकांश नेताहरू पञ्चायतकालका विद्यार्थीको राजनीतिक पर्चाभन्दा माथि उठ्न सकेनन् । त्योभन्दा पृथक् हैसियत बनाउन सकेनन् । सबै पानीमाथि तैरिएका छन्, जनभावनाको गहिराइमा गोता मार्न सकेका छैनन् । त्यसैको दुष्परिणाम हो- आन्दोलनपछिको संवेदनहीन र सत्ताभोगमा लम्पट राजनीति ।
जब हामी गणतन्त्रको संस्था निर्माण गर्न थाल्यौं, त्यसको नेतृत्व गर्ने पदाधिकारी चयन गर्न थाल्यौं, प्रारम्भदेखि नै स्खलित हुन थाल्यौं । गणतन्त्रलाई हामीले राजाको ठाउँमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था ठान्यौं । त्यसैले जनताले गणतन्त्रको अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था बन्न सकेन । फेरि गणतन्त्र भनेको राष्ट्रपति हुने व्यक्तिको छाया पनि त होइन । यसलाई लोकतन्त्रको समग्रतामा हेर्नपर्ने हुन्छ । हाम्रो राजनीतिक चरित्रमा हेर्नपर्ने हुन्छ । जब राजनीतिमा शक्तिप्राप्ति एक मात्र उद्देश्य हुन्छ, राजनीति गर्नेहरू ‘शक्तिका पथयात्री’ मात्र हुन्छन्, यसको व्यापक उद्देश्य हराउँछ, नीति र दर्शन सकिन्छ । अहिले शक्तिका पथयात्रीले लोकतन्त्रको आवरु उतारेका छन् । गणतन्त्रलाई मात्र अलग गरेर हेर्न कसरी मिल्छ र ?
राजधानी काठमाडौंमा २०५८-२०५९ सालतिर नेविसंघ र अखिलका विद्यार्थीहरूले पहिलोपटक गणतन्त्रको नारा लगाउँदा अग्रफंतिमा थिए— गगन थापा, रामकुमारी झाँक्रीहरू । चाबेल क्याम्समा कुन्दन काफ्लेहरू गणतन्त्रको बाकस थाप्थे, विद्यार्थी मत संकलन गर्न । प्रबुद्ध नागरिकहरू सडकमा निस्के, देशैभरि गणतन्त्र र शान्तिको एजेन्डा बोकेर । पार्टीहरूले गिरेको साखलाई पुन:स्थापित गरे आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा बसेर । गणतन्त्र आएपछि राष्ट्रपति बनेकाहरूके गर्दै थिए त्यतिखेर ?
गणतन्त्रबारे के सोच थियो तिनको, त्यसबेला ? के उनीहरू कसैले कहिल्यै आफ्नो पार्टी पंक्तिमा, जनतामा गणतन्त्रको कुनै सोच प्रवाह गरेका थिए ? छ उनीहरूको कुनै त्यस्तो सार्वजनिक अभिव्यक्तिको अभिलेख गणतन्त्रको पक्षमा ? सबैभन्दा ठूलो विडम्बना त्यही भएको छ । त्यसैले अहिले गणतन्त्र भनेको राष्ट्रपतिको एउटा स्थूल मूर्तिमा सीमित भएको छ, नागरिक स्पन्दन छैन त्यहाँ ।
आखिर चुनाव नै पनि त कति फराकिलो छ र यसको भित्री पक्षमा पुगेर हेर्ने हो भने ? पहिलो राष्ट्रपति तीन जनाको निर्णय हो— गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादव । अहिलेका राष्ट्रपति पनि त दुई जना- केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को चयन न हो । संसद् वा निर्वाचकमण्डलमा मतदान त एउटा औपचारिक प्रक्रिया मात्र त हो नि ! हो, दलीय प्रणालीमा थोरै मतदाताले गर्ने मतदान सामान्यतया औपचारिकतामै सीमित हुन्छ । परिणाम मतदानपहिले नै थाहा हुन्छ । अप्रत्यक्ष निर्वाचनमा यसको धेरै विकल्प पनि छैन । चुनाव प्रणाली नै बदल्नुपर्छ भन्ने मेरो मत होइन । दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्दा फराकिलो मन बनाउन सके मात्रै पनि यसमा व्यापक सामाजिक-नागरिक अभिमत र अपनत्व सिञ्चन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि पार्टीका निर्णायक ‘ठालू’ हरू आफ्नो खल्तीबाट कसैलाई पुरस्कार दिने ‘सुल्तानी’ परम्पराबाट मुक्त हुनुपर्छ ।
गणतन्त्रको घोषणाभन्दा पनि यसको रचना महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अझ त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यसले बसाल्ने गणतान्त्रिक संस्कार हुन्छ । त्यसैले अहिलेको गणतन्त्र आन्दोलनकारीको रचना होइन, कांग्रेस, एमालेका लागि त अपुताली परेको मात्र हो । अपुताली परेको सम्पत्ति मस्तीमा उडाइन्छ भन्ने हाम्रो उखान छ । हाम्रो गणतन्त्रको रंगढंग पनि त्यस्तै लाग्छ, त्यस्तै देखिन्छ । आत्मा अपहरित, भोगचलनको वस्तु भएको छ । नीति र दर्शनबिनाको एउटा पदीय अलंकारमा सीमित भएको छ ।
तर, प्राविधिक नै भए पनि गणतन्त्र नेपालको राजनीतिक यथार्थ हो, यसमा कुनै शंका छैन । फेरि राजसंस्था फर्किंदैन । फर्किन्छ कि भन्ने भ्रम कसैले नपाले हुन्छ । तर, के राजसंस्था समाप्तिको घोषणा हुनु र नारायणहिटी दरबारमा श्रपेच लाएर बस्ने राजा नहुनु नै गणतन्त्र परिचायक हो ? गणतन्त्रको नाममा हामीले खोजेको यत्ति नै हो त ? पक्कै होइन, त्यति त हामीले पाएकै छौं । किन गुनासो सुनिन्छ गणतन्त्रका बारेमा ? किन आक्रोश पोखिन्छ राष्ट्रपतिका ‘सवारी’ र ‘सन्देश’ मा ? यसपालि एउटा कमी भयो, संसद्मा राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन
गर्दा ‘मेरो सरकार’ भन्ने बोली परेनछ । मानिसहरूले यसैमा खुसी व्यक्त गरे, त्यति सानो कुरामा पनि । आखिर के नै बढी खोजेका रहेछन् र जनताले, जुन पालना गर्न सकिन्न ?
गणतन्त्र भनेर राजनीतिक पार्टीहरूले के-के खोजेका थिए ! सायद राजा-महाराजाभन्दा ठूलो आकार र सानसौकतमा आफ्नो प्रतिमूर्ति खोजेका थिए । त्यसको प्राविधिक संरचनामा मैले यहाँ बहस गर्न खोजेको होइन । आम मानिसलाई त्यसमा खासै ठूलो सरोकार पनि हुँदैन । त्यो त संविधानले व्यवस्था गर्ने एउटा रूप हो । जनता आफ्नो रुचिअनुसार दलको पछि लागेर कार्यकारी राष्ट्रपति कि आलंकारिक, विवादमा विभाजित हुनु त्यति जरुरी छैन । त्यसले गणतन्त्रको अपनत्वमा भिन्नता दिने पनि होइन । मैले यहाँ चाहेको भावनात्मक पक्ष हो, राष्ट्रपति हुने व्यक्तिको नागरिक छवि, व्यवहार र संवेदनशीलताको कुरा हो, जसले हामी सबैलाई गणतन्त्रको निकटतम स्पन्दन दिन सक्छ ।
हामी सामान्य नागरिकले सडकमा गणतन्त्रको नारा लगाउँदा कुनै ठूलो तडकभडकको संरचना खोजेका थिएनौं । शक्तिशाली संस्था अनि त्यसमा ठूलो र जनता नै डराउनुपर्ने व्यक्ति विराजमान भएको पनि खोजेका थिएनौं । शासनको प्रतिविबव दिने गणतन्त्रभन्दा ‘गणराज्य’ खोजेका थियौं । राष्ट्रपति सडकमा आउजाउ गर्दा जनता छेउलागेर दासजस्तो मूर्तिवत् हुनुपर्ने अवस्था त झन् पटक्कै खोजिएको थिएन । सबै नेपालीको सम्मान र समानताको एउटा सालिन प्रतीक खोजेका थियौं । ‘अधिराज्य’ बाट ‘गणराज्य’ मा रूपान्तरण खोजेका थियौं । गणतन्त्र भन्ने पदावलीमा म फेरि शासनयन्त्रकै संरचना देख्छु, जब कि गणराज्यले एउटा सामुदायिक भावनाको अभिव्यक्ति दिन्छ । त्यसैले संविधानमा ‘संघीय गणराज्य नेपाल’ लेखियोस् भन्ने चाहना थियो । संविधान र कानुनमा शब्दको अर्थ र व्याख्या रहन्छ, राजनीतिमा पहिचान र प्रतीकात्मक संवेदनशीलता । उद्देश्य र प्रयोगले समेट्न सके, समतामूलक नागरिक संस्कार बनाउन सके शब्दको भिन्नता त्यति ठूलो कुरा हुँदैन ।
मैले गणतन्त्रको कुरा गर्दा धेरै ठूलो आकांक्षा पालेको थिइनँ । जन्मका आधारमा राज्यको सुविधा र पदको उच्चासनको अन्त्यभन्दा बढी खोजेको थिइनँ । संस्कारबिनाको लोकतन्त्र, गणतन्त्रमा सैनिकले बुट बजारेको डरलाग्दो ध्वनि प्रवाहित हुन्छ । के दायाँ-बायाँ सैनिक परेडबिना राष्ट्रपतिको आवागमन सम्भव छैन ? के त्यो बिनापदको आधिकारिकता रहँदैन ? यो सुरक्षाको प्रश्न होइन, राजनीतिक-नागरिक सोच र संस्कारमा अविश्वास एवं वैचारिक स्खलनको संकेत हो । सडकको परेडलाई अदृश्य बनाउन हेलिकोप्टरको विकल्पका कुरा पनि सुनिन्छ अहिले । त्यो अझ नागरिक सम्बन्धविच्छेद भएको भुइँफुट्टा राष्ट्रपति बनाउने कुरा भयो । सबैले भन्ने बेला आएको छ- नागरिक स्वाभिमान नभएको र सेनाको सलामीमा रमाउने राष्ट्रपति हाम्रो अपेक्षा होइन ।
प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७७ ०९:१२